33Aross: Na-ele Ndị Na-ege Ntị Ego na Nza Ego Zoro Ezo | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 15, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị ahụla ndị nkwusa ntanetị na-alụ ọgụ n'afọ a. Ọtụtụ n'ime ha mụbara ọdịnaya ha, gbasaa mkpuchi isiokwu ha, zụta ndị na-ege ntị ka ha nwekwuo ọnụ ọgụgụ nlele ha, ma mepee saịtị ha na mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ niile. Onwe m, ekwenyere m na nke ahụ bụ mmejọ. Anyị ezere ịzụ ndị na-ege ntị, debe isiokwu anyị, anyị ajụla mgbasa ozi ugboro ugboro site na mgbasa ozi na-abụghị isiokwu.
Obi dị m ụtọ, netwọk mgbasa ozi na-aza. Echere na a ga-emefu $ 160 ijeri n'ụwa niile na mgbasa ozi dijitalụ na afọ a, ka Nnyocha Nyocha. Nyiwe dika 33Aga na-atụ anya ịhazi otu ndị ahịa na-emekọrịta na mgbasa ozi n'ịntanetị maka itinyekwu aka karịa itinye uche na usoro nlele anya. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa na CMO kwesịrị ịdị na-akwado ROI site na mgbasa ozi n'ịntanetị ha. Kpụrụ ọrụ ụlọ ọrụ dịka Media Ratings Council (MRC), setịpụla ebe mmanya dị ala mgbe ọ bịara ịchọpụta ma e lere mgbasa ozi anya viewable.
Echiche nlegharị anya Mobile na Desktọpụ chọrọ ọ dịkarịa ala 50% nke pikselụ ka a na-ele anya ma ọ dịkarịa ala otu sekọnd maka mgbasa ozi ngosi, sekọnd abụọ maka mgbasa ozi vidiyo. MRC
N'akụkụ nke ọzọ, ndị nkwusa na-agbasi mgba ike iji kpata ego na saịtị ha. Ndị na-azụ ahịa na-akụda mmụọ, na-ezigara ha ozi na-adịghị mkpa ma ọ bụ na-akpaghasị mgbe ha na-eri ọdịnaya. Ọ bụ okwu ndị a yana nyocha miri emi nke ndị na-azụ ahịa na mgbasa ozi n'ịntanetị nke kpụrụ usoro na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ abụọ 33Aga.
Vidio ọhụụ na Ngosiputa Ngosipụta Ngosipụta Na-enye Ngosiputa Ọrụ Niile
33Aga gbasaa usoro ihe omume ya site na ntinye nke Desktọpụ Na-Video Video na Desktọpụ Na-Nri Mmetụta. Ezubere iji nyere ndị nkwusa aka ị nweta ego nkwụnye ego, ngwaahịa ọhụrụ ndị a anaghị egbochi, mgbasa ozi dị elu nke na-apụta n'ime ọdịnaya weebụsaịtị ma ọ bụ ndepụta ngwaahịa. Mpaghara mgbasa ozi na-aza omume akwụkwọ mpịakọta nke onye ọrụ ma na-ahụ anya ma ọ bụrụhaala na okike dịkarịa ala 50 pasent.
Ka vidiyo na-aga n'ihu na-eto eto na ewu ewu, 33Aga'Desktọpụ In-ndepụta Video ad nkeji na-akpaghị aka igwu egwu 15- na 30 nkeji nke abụọ na-agbanwe maka mkpanaka na ikiri desktọọpụ, na-apụta na iyi ọdịnaya mgbe ihe okike dịkarịa ala 50 pasent na-ele. Ozugbo onye ọrụ si lee ya, vidiyo ahụ kwụsịtụrụ ma maliteghachi igwu egwu ozugbo elelere ya. Ezubere ngwaahịa ndị ọhụrụ maka ahụmịhe onye ọrụ na-anaghị egbochi, na-enye ndị ahịa njikwa zuru oke na ahụmịhe, yana nhọrọ iji jikwaa olu ma ọ bụ mechie mgbasa.
Iji nyochaa saịtị anyị n'ụzọ zuru ezu, anyị kwesịrị ịzaghachi maka ọdịmma nke ndị ọrụ chọrọ ahụmịhe na-abụghị intrusive na desktọọpụ na mkpanaka yana ihe ndị na-azụ maka mbugharị na mbụ, ngwaahịa ndị na-ewepụta na-ele anya dị elu. Peter Cunha, Etinye Channel
Nnyocha nke Mgbasa ozi N'ịntanetị na-ekpughe Oge Kachasị Njikọ Ndị Ọrụ
Ngwaahịa ndị ọhụrụ na-egosipụta 33Aga'Nnyocha na nso nso a, na-atụle etu esi egosipụta mgbasa ozi n'ịntanetị yana ogologo oge ad iji lelee etu eziokwu abụọ a si emetụta njikọ ndị ọrụ. Mgbe nyochachara mgbasa ozi mgbasa ozi 160 na ntanetị gafee saịtị 738 maka otu izu, 33Across chọpụtara na ná nkezi, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-pịa mgbasa ozi na akara 15-nke abụọ na njikọ aka na-arịwanye elu karịa oge. Ngwaọrụ gbadaa:
50% nke njikọ aka onye ọrụ mere na desktọọpụ mgbe 15 gachara
Na mkpanaka na mbadamba, 50% nke njikọ aka onye ọrụ mere mgbe sekọnd asaa
Site na akara ngosi 30-nke abụọ, 68% nke njikọ aka niile mere na desktọọpụ, 74% mere na mkpanaka, na 78% mere na mbadamba
Nyocha ahụ gosipụtara na maka mgbasa ozi n'ịntanetị ka ọ dị irè, mgbasa ozi kwesịrị ịbụ nke a na-ahụ anya nke ukwuu na elele anya karịa ihe kacha nta ugbu a.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ isi nke marketer bụ nlele dabere na ụkpụrụ MRC na nyocha anyị gosipụtara na pasent 98 nke njikọ aka na-eme mgbe otu nke abụọ gasịrị. O doro anya na enwere obere ohere ndị ọrụ ga-ahụ mgbasa ozi ahụ, obere itinye aka na ya. Maka CMO iji nweghachi ọ bụla bara uru na ntinye ego ha, ọ dị ha mkpa ibuli mmanya na ma mgbasa ozi mgbasa ozi na oge-na-ele. Eric Wheeler, Onye isi ala, 33Aross.
Standardskpụrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị mgbasa ozi kwesịrị ileba anya na elele oge mgbasa ozi wee chọpụta ma nkeji mgbasa ozi ga-adị ogologo oge iji nweta nzaghachi ma ọ bụ nwee mmetụta bara uru. Iji nwetakwuo ịkwado ntinye ego ha na mgbasa ozi dijitalụ, ịbawanye njikọ aka, ma zere ntụpọ ìsì, ha kwesịrị ịgbakwunye ntanetị na-egosipụta na nkeji n'ime ngwakọta ahịa.
Enwere ike idozi okwu mgbagwoju anya kachasị sie ike ma ọ bụrụ na ịkọwapụta okwu gbara ọkpụrụkpụ dị n'etiti ihe mgbagwoju anya. N'ọtụtụ egwuregwu mgbagwoju anya ndị a na-abụkarị ihe dị ka 32 ma ọ bụ 33 n'ofe. 33Aga unloves nke mgbaghoju anya nke mgbasa ozi n'ịntanetị mara mma.
Tags: 33 gafere33nkeechiche mgbasa ozindị na-ahụ maka mgbasa ozimrcmgbasa ozi mmemmemonetization nkwusantuziaka nduga
Ọdịnaya Ogologo: Nlebara Anya na Njikọ Aka